Abanye abaFundi beKholeji bawuthanda ukuNqanda ukuCoca kwiCampus
Inkululeko yeNdibano yoxolo, Intetho kunye neNkcazo Ziyasebenza kwiPhakheji
Kwingxelo ye- Gallup ka- 2016 malunga nendlela abafundi beekholeji bajonga ngayo inkululeko yenkxininiso , malunga nesiqingatha bathi bakholelwa ekunciphiseni ukufikelela kweendaba kumaphephandaba kwiimeko ezithile.
Uphando lufumanise ukuba ama-48 ekhulwini kwabafundi beekholeji baxhasa ukukhawuleza ukufikelela kweendaba kumaphephandaba xa i-campus protesters ifuna ukushiywa yodwa, ngoxa ama-49 ekhulwini axhasa imida enjalo xa bekholelwa ukuba intatheli iya kubakhokelela. Amaphesenti angamashumi amane anesine ekuxhasa ukufikelela kokunciphisa ukufikelela kwenkcazo xa abafundi befuna ukuxelela amabali abo ngokwabo kwimidiya yoluntu .
Ngaba iMedia iya kunika abaProfethi baBaphathiswa beBanga?
Abaqhubi bathi banelungelo lokudala i-campus "iindawo ezikhuselekileyo" apho abafundi banokuziva bazikhuselekile. Kwaba bafundi, oku kubandakanya ukuba afune ukuhlangabezana nazo naziphi na izimvo ezahlukileyo zabo, kwaye kungabikho ukusebenzisana neentengiso zamaphephandaba ezinokuthi zibe ngundoqo kwiinkqubo zokubhikisha.
Yintoni ephazamisayo ngokwenene ngeziphumo zeGallup zezi: Ziyabonisa ukuba bangaphi abafundi beekholeji abangaqondi okanye abangakhathaleli ngokuqinisekileyo kokuQuqulwa koTshintsho lweNkululeko yokuthetha kunye ne-press .
Oko kuhlongozwa okokuqala
Ukunxulunyanisa, okokuthi, ukuba iSilungiso sokuQinisekisa kwakhona siqinisekisa amalungelo abo bafundi ukuba babambe uhlobo loqhankqalazo oluye lwabekwa udaba lweendaba kwiindawo zokuqala, apho abafundi babeya kukwazi ukuba ngaba bafunde iSihlomelo sokuQala:
I-Congress ayiyi kwenza umthetho onxulumene nokusekwa kwenkolo, okanye ukuthintela ukusetyenziswa kwayo kwamahhala; okanye ukukhawuleza inkululeko yokuthetha, okanye ye-press, okanye ilungelo labantu ngokudibanisa ukuhlangana, nokucela urhulumente ukulungiswa kwezikhalazo.
Ngaba izinto malunga nabantu abanelungelo lokuhlangana ngokuthula, kunye nokucela urhulumente ukuba alungise izikhalazo? Yiloo nto imibhikisho ekhoyo malunga nayo.
Ubudlelwane phakathi koLwazi lweNdwendwe kunye nokuSebenza
Uhambo lweendaba alukho malunga nobudlelwane bobudlelwane boluntu nabani na, nokuba ngaba igosa likaRhulumente, isigqeba solawulo okanye iqela lababonisi bezemfundo.
Ngumsebenzi we-press ukunika ingxelo ngokuchanekileyo nangokugxeka kubo bobabini kunye namaziko.
Ngokufanayo, xa isiqingatha sabafundi beekholeji bexhasa ukukhusela ababhali beendaba ngenxa yezinto ezibonakalayo, kunye ne-half half support inkxaso ye-curbs xa abafundi befuna ukuba umyalezo wabo ungabonakali ngokusesikweni kwiindaba zentlalo, nto leyo ibonisa ukungazi kakuhle indlela i-marketplace yeembono esebenza ngayo ngentando yeninzi. Nokuba unokuba uzama ukuzikhusela kunye nokuhamba kwakho ekugxeka, wonke umntu kufuneka akhuthazele izitya kunye neentolo zokuhlolisiswa ngabo bobabini beendaba kunye noluntu.
Uluhlu olunjani ukuba iTable Table yakho yeTable Table? Ngaba i-19mm Ngokwenene iyanqabile?
U-Leo kunye neSagittarius Uthando oluhambelanayo
Ukufundwa okucetywayo ngesiGrike (isiGrike) IsiPaganism
15 Uninzi lweengoma ezingaqhelekanga ze-Pop Hit Songs Zonke ixesha